Qualcomm Snapdragon 710: processor-ka cusub ee dhexdhexaadka ah | Androidsis
Snapdragon 710: processor-ka cusub ee bartamaha-dhexe
Dhowr bilood ka hor ayaa la xaqiijiyay in Qualcomm wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo qoys cusub oo ka shaqeeya. Waxay ku saabsan tahay Snapdragon 700, oo doonaya inay diiradda saaraan heerka dhexe iyo heerka dhexe. Marka waxay u yimaadeen inay daboolaan farqiga u dhexeeya qoyska 600 iyo 800. Ugu dambeyntiina, processor-kii ugu horreeyay ee qoyskan cusub ayaa hadda rasmi ah. Waxay ku saabsan tahay Snapdragon 710.
Fikradda processor-kan ayaa ah in la siiyo dadka isticmaala a waayo-aragnimo la mid ah waxa ay ku helaan dhamaadka-sare, laakiin taleefannada ka jaban. Sidoo kale, sida aad filan karto, sirdoonka macmalka ah ayaa door muhiim ah ka ciyaara Snapdragon 710.
Waxaan ka helnay wadar ahaan sideed koronto processor-kan. Laba ka mid ahi waa waxqabad sare, xawaare dhan 2.2 GHz, halka lixda kale ay gaaraan xawaare 1,7 GHz ah.Waxay heli doontaa taageero ilaa 16 GB oo RAM ah. Faahfaahin aan la ogaan, maxaa yeelay waa wax aan caadi ahayn inay jiraan taleefanno leh awooddan.
Snapdragon 710 sidoo kale wuxuu leeyahay xarun badan oo loogu talagalay sirdoonka farsamada. Waxay umuuqataa inay noqonayso DSP Hexagon, oo horeyba ugujiray processor-yada kale ee Qualcomm. Waxaa la sheegay inay labanlaab noqon doonto waxqabadka kii ka horreeyay ee Snapdragon 660. Waxaan sidoo kale helnaa laba sawir oo sawir-qaade Spectra 250 waxay u oggolaan doontaa adeegsiga kaamirooyinka illaa 32 MP ama kamarado labalaab ah illaa 20 + 20 MP.
Fiidiyowyada 4K waxay sidoo kale gaarayaan bartamaha-dhexe iyada oo ay ugu mahadcelinayaan Snapdragon 710. Maaddaama processor-ku u oggolaan doono taranka. Dhanka isku xirnaanta, waxay yeelan doontaa modem X15 ah oo bixin kara xawaare soo degsiimo ah 800 Mbps. Intaa waxaa dheer, waxay ku fulin doontaa 4 × 4 MIMO LTE iyo 2 × 2 Wi-Fi.
Snapdragon 710 waxaa lagu dhisay 10nm naqshadaha dhismaha. Shirkadda Qualcomm ayaa xaqiijisay in processor-ku uu haatan diyaar yahay waxna soo saarayo. Marka soo saarayaasha ayaa bilaabi kara inay ku dalbadaan taleefannadooda. Markaa waxay u badan tahay in bilaha soo socda aan durba arki doonno qalab suuqa yaala oo adeegsanaya processor-kan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 710: processor-ka cusub ee bartamaha-dhexe